विवाह विशेष - नारी
राजधानीमा गत महिना विवाहलाई लक्षित गरी ‘वेडिङ कार्निभल’ सम्पन्न भयो । विवाहको मण्डप, गेटको साजसज्जासहित, दुलहीलाई बोक्ने डोली, परम्परागत भाँडाकुँडा, सौन्दर्यका सामग्रीहरू, छाता, ऐतिहासिक बाजागाजा, दुलहा–दुलही बस्ने स्थल, स्वयंवर, वरणी, साइपाटाका सामग्रीहरू, खानाका स्टलहरू, पूजाका सामग्रीहरू कानिर्भलमा सजाइएको थियो । आयोजक वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्टकी निर्देशक नीता पौडेलले वैवाहिक समारोहको तयारी र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्निभलको आयोजना गरिएको बताइन् । ‘सबै सर–सामग्री जुटाएर विवाह गर्न निकै झन्झटिलो हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘अर्को कुरा आफ्नो बजेटमा रहेर विवाहको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ पहिले विवाहका लागि दुलहा बग्गी चढेर जान्थे भने लकडाउनमा घोडा ल्याउन गाह्रो भएकाले परम्परागत काठको डोली प्रयोगमा आयो । फूलहरूले सजाएर आकर्षक बनाइएको काठको डोलीमा बेहुलीहरूले निकै आनन्द लिए ।
नारी संवाददाता , मंसिर ५, २०७८
विवाहमा मिश्रित संस्कृति
श्रीमान्को संस्कार र परम्परामा जति श्रीमती घुलमिल हुनैपर्छ भन्ने मान्यता छ श्रीमान् पनि श्रीमतीको संस्कृतिसँग उति नै नजिक हुनु जरुरी छ ।
लक्ष्मी भण्डारी, मंसिर ५, २०७८
विवाहका फरक रंग
‘हरेक पुरुषले आत्माको अमरतामा झैं विवाहको अमरतामा विश्वास गर्नुपर्छ’ बाल्ज्याकले भनेझैं यदि मृत्युपछि पनि अमर रहने हो भने विवाह जरुरी छ भन्ने महावाणीहरू सबैतिर छन् । एच जाइल्सले भनेकै छन्, ‘वैवाहिक जीवनको पारस्परिक सन्तुष्टिभन्दा महान् सांसारिक सुख संसारमा अरु छैन ।’
लक्ष्मी भण्डारी, मंसिर ७, २०७७
बिहाबारी कति वर्षपारि ?
विवाहका लागि सही जीवनसाथी चयन गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हो । अहिले त विज्ञानका अनुसार पनि विवाहका लागि सही उमेरका बारेमा जानकार हुनु आवश्यक छ ।
रोजिन शाक्य, मंसिर ५, २०७७
विवाहको बन्दोबस्ती पहिलेको तुलनामा अहिले सजिलो भएको छ । कतिपय कम्पनीले विवाहमा आवश्यक सबै तारतम्य मिलाइदिने भएकाले सजिलो भएको हो । अहिले कार्ड छाप्ने, किनमेल गरिदिने, कार्ड बाँड्ने, घर सजाउने, गाडीको व्यवस्था गर्ने, खानपान, अतिथि सत्कारदेखि गरगहना किनमेलसम्मको काम गरिदिने कम्पनी खुलेका छन् ।
शरीरका यी अङ्गको एक्सफोलिएट
ओठको पनि एक्सफोलिएट गर्नु जरुरी छ । यसबाट ओठका शुष्क तथा मृतकोशिकाहरू हटाउन सकिन्छ । बजारमा अनेकौं प्रकारका लिप स्क्रब उपलब्ध हुन्छन् । ओठलाई नरम एवं गुलाफी बनाउन खैरो चिनीमा थोरै मात्रामा ओलिभ आयल वा मह मिसाएर ओठमा मल्न सकिन्छ ।
नारी संवाददाता , मंसिर २०, २०७६
विवाह सम्झौता र पश्चातापमा बिताउनु नपरोस् भनेर प्रि–म्यारिटल काउन्सिलिङ आवश्यक हुन्छ । विवाहपछि जिम्मेवारी बढ्छ, जसलाई निर्वाह गर्न, एक–अर्काको अपेक्षा बुझ्न तथा त्यसमा खरो उत्रन आवश्यक हुन्छ ।
सुजाता मुखिया, मंसिर ९, २०७६
नवदम्पतीहरू विवाहलगत्तै एक–अर्कासँग नितान्त निजी पल साट्न चाहन्छन् । विवाहको धपेडीबाट विश्राम लिने उपयुक्त बाहना पनि हो यो हो भने भोलिका दिनमा कसरी दाम्पत्य जीवनलाई अघि बढाउने भन्ने पूर्वतयारी पनि हो । त्यसैले विवाह लगत्तैको हनिमुन एउटा सुखद् सुरुवात हो । विवाहको थकान मेट्ने अवसर भएकाले हनिमुन जानु भनेको रिफ्रेस हुनु पनि हो ।
नारी संवाददाता , मंसिर ४, २०७६
दुलहीको दाँतको हेरचाह कस्मेटिक उपचार
विवाहको मौसम छ । हाम्रो जीवनमा सौन्दर्य र फेसनका साथै मुस्कानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसकारण पनि राम्रो मुस्कानका लागि चिटिक्क मिलेका सेता दाँत आवश्यक मानिन्छ ।
डा.रिना शाक्य, माघ १७, २०७५
फोटो–भिडियोका लागि ड्रोनको माग बढेको छ
विवाह जीवनकै सबैभन्दा सुन्दर मुभमेन्टमध्ये एक हो । यो सुन्दर क्षणलाई स्मरणीय बनाउन अहिले वेडिङ फोटोग्राफी तथा भिडियोग्राफी गर्ने चलन छ । वेडिङ फोटोग्राफीलाई नेचुरल मुभमेन्ट र एक्प्रेसन कैद गर्ने फोटोग्राफीका रूपमा लिइन्छ, जहाँ विवाह गतिविधिका सबै सुन्दर, खुसी, उमङ्ग र रोदनका क्षणहरूलाई सुन्दर एवं जीवन्त रूपमा क्यामेरामा कैद गरिन्छ ।
नारी संवाददाता , माघ १५, २०७५
पूर्ण प्याकेजमा के–के हुन्छ ?
विवाहका लागि पूर्ण प्याकेज उपलब्ध गराउनेहरूले विवाहको छिनोफानोदेखि हनिमुनसम्मको प्याकेज उपलब्ध गराउँछन् । प्याकेजमा सपिङ, ठाउँ छनोटदेखि बजेटको योजनासम्मको कामका साथै ब्याचलर पार्टीको समेत प्रबन्ध मिलाइन्छ ।
नीता पौडेल, वेलकम वेडिङ माघ ५, २०७५